Things To Know Lapho Ukushayela EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Things To Know Lapho Ukushayela EYurophu
Kanye namakhulu ezikhangayo mlando kanye ukubukwa okukhulu ziyashiyana kusukela elangeni wamanga ogwini ukuze izintaba cavernous, IYurophu inenye futhi ngempela konke. Kuyinto lapho uya khona ephelele uhambo ngemoto, njengoba kungenzeka kwenze ukuze enze indlela yakho kusuka kwelinye izwe indaba amahora. Libuye yezindawo ephephe kunayo yonke emhlabeni ukuhamba. Naphezu izindaba EU sisanda kwehluleka ukunciphisa amazinga ukushayela esiyingozi, isilinganiso nokufa rate namanje ephansi kade kwaba (1 e 49 abayizigidi ezingu).
Kuyaphawuleka ukuthi kukhona kwezinqubomgomo ezithile nemikhawulo endaweni mayelana nezimoto eziqashwayo nokuthi izwe ngalinye awayo imithetho esiyingqayizivele. Yini kwamukeleka ngokuphelele kwelinye izwe (ukushayela ngaphandle umkhawulo isivinini phezu Autobahn eJalimane, Ngokwesibonelo) kungenzeka kungabi kwenye, ngakho kuyasiza ukuqonda imithetho yomgwaqo njengoba wenza indlela yakho ngokusebenzisa nezwekazi.
Unalokhu engqondweni, sizilungisile amanye amathiphu Ukugunda ukusiza ukuthi uhlale uvikelekile futhi ngaphakathi nokuzabalaza ngokuvumelana nomthetho ngesikhathi uhambo olulandelayo European umgwaqo:
1) Insure Imoto Yakho
Kubaluleke kakhulu ukuthi une umshwalense kanye nekhava ukuwohloka ngenkathi ushayela eYurophu. Uma uphuza imoto yakho siqu, uzodinga ukuxhumana yakho inkampani yomshuwalense ulungisele. Umshwalense ngokuvamile aboshelwe on inkontileka yakho uma ukuqasha imoto, okwenza izinto kancane kulula.
2) Letha Glasses elingasebenzi Futhi contact lenses
Bewazi yini ukuthi uma udinga ukugqoka kadokotela lens lapho zishayela imoto eqashiwe olunqamula eSpain, Ungu edingekayo yokwenza pair yesibili nawe ngaso sonke isikhathi? Amanye amazwe kukhona lokuyekethisa ngalokhu, kodwa kuyisenzo esilungile baphathe pair of izibuko yesibili nawe ngaso sonke isikhathi, ukuqinisekisa uyazi zonke izingozi ngenkathi kho hambo! yakho eyinhloko izibuko ikhefu noma kufanele babe elahlekile.
3) Ngokusobala Gwema Ukuphuza Futhi Ukushayela
Nakuba lokhu kungase kubonakale esitatimendeni esobala, ungahle uqaphele ukuthi emazweni athile inomkhawulo zero ukubekezelelana for isiphuzo abashayeli. Lokhu kusho ukuthi abashayeli abavunyelwe uneminye utshwala egazini labo leze. I-European Commission linikeza iseluleko phezu standard blood alcohol umkhawulo izwe ngalinye. ekhatsi Cyprus, kuba ngisho Kuphambene nomthetho baphuze isiphuzo ngacela ngenkathi ushayela. Lokhu kungase kubonakale esiqinile, kodwa kubalulekile ukuhlonipha imithetho yezwe uvakashela ukugwema noma iyiphi inhlawulo ezingalindelekile.
4) Shayela uye kwesokunene noma Kwesokunxele
Ngaphandle kwase-United Kingdom, Ireland, futhi Malta, wonke amazwe aseYurophu ukushayela ngakwesokudla eceleni komgwaqo. Ukuze izakhamuzi UK, lokhu kungenza aqondisa like sizongena a ezungezayo ohlangothini ngokuphambene nokuhamba kwewashi ngempela olukhohlisayo, ngakho kuwufanele ukuthatha isikhathi ukujwayela. Abashayeli kumele njalo unamathele ilungelo futhi ugweme ukuhlala izindlela isikhungo emikhulu behlangabezana. lapho kuyomfica, khumbula ngaso sonke isikhathi hlola ezingemuva yakho buka esibukweni futhi.
5) Ukuxubha Up On Road lakho Izimpawu
Ukuqonda izimpawu zomgwaqo European izokusiza ukuthi ufinyelele uphephile lapho uya khona futhi kuyokusiza ukuba ugweme lokwephula umthetho. Iningi izindawo European sebenzisa izimpawu ejwayelekile okuyinto okunengqondo self ochazayo, kodwa umehluko ingane ifonti nobe umbala bavame ukudida. Ngaphambi kokuba bathathe uhambo, you might want to familiarize yourself with the umehluko lobhacile kwezimpawu zomgwaqo kulo lonke elaseYurophu. Okungenani, ke kungasiza ekuvimbeleni ukudideka, futhi okungenani, kungasindisa impilo yakho.
6) Qonda kanjani Toll Amaqoqo Umsebenzi
amazwe ezehlukene zinezidingo ezehlukene okhokhelwayo amazinga kanye nezindlela iqoqo toll. eFrance, Ngokwesibonelo, kusenzima uyamukeleka ilahlekelwe ukheshi emasangweni toll. Ezinye izindawo zizodinga ukuba abonise sticker imoto yakho ukugqamisa ukuthi usukhokhe ukusebenzisa imigwaqo ethile. Ekwetayeta ngokwakho nge indlela toll ukusebenza ngamunye yezindawo zakho okuhloswe kuyokusiza ukuba ugweme noma yiziphi izinhlawulo.
7) Thatha The Train Kunalokho Of Ukushayela
Well uma ufuna ngempela ukujabulela uhambo lwakho, ukushiya kokuhlupheka ukushayela, futhi nje uthatha isitimela e-Europe, wonke umuntu kule izwekazi zisebenzisa isitimela, futhi ngokungafani nezinye izindawo emhlabeni, kulula kakhulu yokuthenga amathikithi esitimela inthanethi nge amasayithi afana Londoloza Isitimela, futhi uthola ukuhamba ubone uhlobo bengabheki kakhulu.
Ulungele ukujabulela Europe? sedlule ukhetha ushayela noma uthatha isitimela, khumbula nathi nganoma Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Izinto ukwazi lapho ushayela eYurophu” ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/things-to-know-when-driving-in-europe/ ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ukushayela wesitimela izitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi
I work as a part time tour guide in Kent and blogs about the experience. Her favorite weekend activity is a walking tour in South West Coast of Bristol. She is also a strong advocate of sustainable lifestyle, and hopes to write a book about it someday. She lives with her parents and her Frenchie named Coco - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte